သင့် Blog ကိုသေစေသောထိပ်ဆုံး SEO 20 အမှားများ - Semalt Overview
ဤခေါင်းစဉ်၏ဆက်စပ်မှုသည်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များသည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်၊ ကုမ္ပဏီ၏ဘဝနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များအကြောင်းဘလော့ဂ်ပုံစံဖြင့်အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးရန်အရေးကြီးပုံကိုနားလည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ SEO တွင်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ကွဲလွဲနေသောသတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများရှိနေခြင်းနှင့်အကြွင်းမဲ့အသိပညာမရှိခြင်းသို့မဟုတ်ပေါ့ဆမှုကြောင့်မကြာခဏဆိုသလို SEO ဆောင်းပါးအမှားများသည်ဘလော့ဂ်ဆောင်းပါးများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရာ၌ရိုးရှင်းစွာပျက်စီးစေနိုင်သည် ကောင်းသောဆောင်ရွက်ချက်။
ထို့ကြောင့် SEO အကောင်းဆုံးအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည့် Semalt သည်အစပြုသူများသာမကအတွေ့အကြုံရှိသောကျွမ်းကျင်သူများမှပြုလုပ်သော SEO နှင့်အမှားအယွင်းများကို ၂၀ ခုမှဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးအမှားတစ်ခုစီကိုမည်သို့ဖြေရှင်းမည်သို့မဟုတ်မည်သို့ရှောင်ရှားရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။
ထိပ်ဆုံး SEO အမှားများ
အဓိက SEO အမှားများကိုအောက်တွင်ရှာဖွေပါ။
၁။ SEO စာသားများ
Baden-Baden algorithm ကိုထုတ်ပြီးသောအခါ Over-optimization ၏အဓိပ္ပါယ်အောက်တွင်ရှိသောအရာအားလုံးသည်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်ရှာဖွေခြင်းမှထွက်သွားပါလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောစာမျက်နှာများစွာသည်ဘလော့ဂ်တစ်ခုတည်းသာမက site တစ်ခုလုံးကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွေဟာဒီလိုမှော်အတတ်မျိုးကိုမကြိုက်ကြဘူး။
2. ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသော copywriters
သူတို့ရေးသားနေသည့်အရာကိုနားမလည်သောသူ။ သူတို့နားမလည်ရင်စာလုံးရေ ၁၀၀၀၊ ဒေါ်လာ ၅၀ ဒါမှမဟုတ် ၅၀၀ အတွက်ဘယ်လောက်ကျသင့်တယ်ဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူး။ ဘလော့ဂ်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ဘယ်သူ့ကိုရေးတာလဲ၊ ဘာကြောင့်ရေးတာလဲဆိုတာကိုတောင်မှနားလည်ဖို့မကြိုးစားဘူး။ ထူးခြားမှု 100%, ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများအတွက်သော့ချက်စာလုံးများအသုံးပြုခြင်း, etc
ခေါင်းစဉ်ကိုနားလည်ပြီးဘလော့ဂ်အတွင်းရှိသီးခြားခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီအတွက်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်စာလုံးများရေးသားနိုင်သောစာရေးဆရာကိုရှာဖွေပါ။ ဘလော့ဂ်ကိုသင်၏အဓိကအကြောင်းအရာနှင့်မသက်ဆိုင်သောအသုံးမကျသောအကြောင်းအရာများဖြင့်ဖြည့်စွက်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်။
ပစ္စည်းများအားလုံးကိုများအတွက် themes များစီစဉ်ထားထုတ်ဝေမီ5မိနစ်ခန့်, ပျံသန်းပေါ်မှာဖန်တီးနေကြသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်သင့်ဘလော့ဂ်တွင်သမာဓိနှင့်စနစ်ကျမှုကင်းမဲ့နေသည်။ ပစ္စည်းများသည်မည်သည့်ရည်မှန်းချက်နှင့်မသက်ဆိုင်သကဲ့သို့ရေးသားပြီးထုတ်ဝေသည်။
သင်ဟာအလှပြင်ဆိုင်တစ်ခုရဲ့ဘလော့ဂ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာလက်သည်းဒီဇိုင်းနဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်တွေအကြောင်းစာသားတစ်ခုအနေဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကမှအလှပြင်ဆိုင်တစ်ခြားဘလော့ဂ်မှပြန်လည်ရေးပြီးသားဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှသာရေးကူးရေးသားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ။
အနည်းဆုံးတော့အားလုံးပါပဲ။ အသစ်သည်ပစ်မှတ်ထားပရိသတ်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်မည့်အစား၊ ကောင်းစွာမေ့သွားသောအဟောင်းဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်သည်ဝါးသည့်သတင်းစာဖြစ်သည်။
ပိုဆိုးသည်မှာ (ဘလော့ဂ်တစ်ခု၏အဖြစ်အပျက်သည်အဆိုးဆုံးဖြစ်သည်) အခြားသူတစ် ဦး ၏အကြောင်းအရာကိုသင်၏ဆိုဒ်သို့ကူးယူခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်စက်ဘီးကိုတီထွင်ရတာလဲ။ ဒီနေရာမှာအရာအားလုံးကိုရေးထားတယ်၊ သင်ဟာရင်းမြစ်နှစ်ခုထဲကတစ်ခုကိုအပိုင်းအစတွေတောင်ထည့်နိုင်တယ်၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်နိဂုံးကိုထည့်နိုင်တယ်၊
၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူများမှအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဆောင်းပါးကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်အနည်းဆုံးရာထူး ၃-၄ ခုကိုတက်ပြီးရှာဖွေရေးအသွားအလာကို ၅၈၇% အထိတိုးမြှင့်ပေးသည်။
၇။ SEO ကိုအပြည့်အဝအသုံးချခြင်း
ဆောင်းပါးများကိုရိုးရှင်းစွာရေးသားပြီးထုတ်ဝေသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် SEO သည်ကြာမြင့်စွာသေနေသောကြောင့်၊ သင်ထင်လျှင်ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာများသည်ရှာဖွေရေးတွင်မပါ။
စတင်ရန်ထွက်စစ်ဆေးပါ Semalt SEO ဆိုသည်မှာအပိုင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်။
ထိုအခါစာအုပ်တစ်အုပ် (သို့) ပုံပြင်များရေးသားခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်၊ အကျိုးကျေးဇူးများပိုများလိမ့်မည်။
ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာကဘာကိုလိုချင်သည်၊ သင်၏အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များစိတ် ၀ င်စားမှုအကြောင်းရေးရန်၊ ဘလော့ဂ်ဆောင်းပါးများအတွက်အကြောင်းအရာများရွေးချယ်မှုသည်သော့ချက်မေးမြန်းချက်များရွေးချယ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံရမည်။
၉ ။ SEO bum
များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ရလဒ်ဖြစ်သည် ဘလော့ဂ် +100500 လမ်းညွှန်များအတွက်မှတ်ပုံတင်။ ဤခေတ်မမီတော့သော link အမှိုက်အမှိုက်များကိုကျော်လွှားပြီး၎င်းသည်အဖြူရောင်လမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမယုံကြည်ပါ။ သို့မဟုတ်ပါကသင်၏ site သည် link အမှိုက်အမှိုက်များကိုသာသိသည့် SEO bum သို့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု၍ ဆက်သွယ်မှုအမြောက်အများကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်။
အကြောင်းအရာအလိုက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရင်းမြစ်များမှလင့်ခ်များကို ၀ ယ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအချိတ်အဆက်တစ်ခု၏ကုန်ကျစရိတ်သည် ပို၍ စျေးကြီးသည်၊ သို့သော်တန်ဖိုးသည်အရည်အသွေးနိမ့်သူ ၁၀၀ ထက်အဆများစွာပိုမိုမြင့်မားလိမ့်မည်။
၁၀။ သင်၏ဘလော့ဂ်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏အဓိက ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သီးခြားဖြစ်သည်
ဤဆောင်းပါးတွင်ပါသောစကားလုံးအချို့သည်လင့်ခ်များဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ၊ သင်ကမီးမောင်းထိုးပြသည့်စကားလုံးခေါင်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအသုံး ၀ င်ပြီးအရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေနိုင်ပြီးပိုမိုပြည့်စုံသောနားလည်မှုကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
သင်သိသည့်အတိုင်းမကြာသေးမီကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်သော့ချက်စာလုံးများနှင့် SEO ဆက်တင်များသာမကအဓိပ္ပာယ်များနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။
ထဲမှာ Yandex webmasters panel ကိုမထုတ်ဝေမီ၊ "မူရင်းစာသားများ" ကဏ္ Site "ဆိုက်သတင်းအချက်အလက်" တွင်စာသားထည့်ပါ။
ထဲမှာ Google က webmasters panel ကို, ထုတ်ဝေပြီးနောက် "Scanning" အပိုင်း - "Google as as View" တွင်။
14. AMP စာမျက်နှာများမရှိခြင်း
မိုဘိုင်းအသွားအလာတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှသင်သည်တုန့်ပြန်ပြီးမြန်ဆန်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်သာမကသင်ချက်ချင်းတင်သောအရှိန် (စာမျက်နှာများ) ကိုလည်းလိုအပ်သည်။
၁၅။ ၁ နှစ်=ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်သို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောဘလော့ဂ်အသစ်တစ်ခု
ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်ဆိုက်ကိုမ ၀ င်ရန်စိတ်ဝင်စားသောအကြောင်းအရာအသစ်ရှာဖွေခြင်းကိုရပ်တန့်သောစာဖတ်သူများသာမကဆုံးရှုံးမှုအခြေအနေများပေါ် မူတည်၍ ဆိုက်ကိုမကြာခဏသို့မဟုတ်မကြာခဏတွားသွားတတ်သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၏အာရုံကိုဆုံးရှုံးသည်။
သက်တောင့်သက်သာသက်သာသည့်နှုန်းထားကိုရွေးပါ (ဥပမာ - တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်) နှင့်ဤ mode တွင်အလုပ်လုပ်ပါ။
16. Unoptimized ပုံရိပ်တွေ
အသေးစိတ်ပုံရိပ်တွေကိုပြသရန်လိုအပ်ပါကအကောင်းဆုံးအရွယ်အစားသည် 20 kb အထိရှိပြီး 100 kb ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် 200 kb အထက်ရှိအရာအားလုံးသည်အလွန်အမင်းခဲယဉ်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် 4-5 ပုံရိပ်များနှင့်သင်၏စာမျက်နှာသည် 1 Mb ထက်ပိုသောအလေးချိန်ရှိပြီး၎င်းသည်လေးလံသောကြောင့်ဝန်တင်ရန်အချိန်များစွာကြာလိမ့်မည်။
ပုံများချုံ့ခြင်းနှင့်အတူပုံရိပ်ပိုကောင်းအောင်။ https://tinypng.com/ - ၎င်းသည်အွန်လိုင်းနှင့်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
၁၇။ spam များကျော်
CMS တစ်ခုချင်းစီအတွက်သီးခြားစာမျက်နှာတစ်ခုသည်အခြားစာမျက်နှာများမှအကြောင်းအရာများကိုတခါတရံမိတ္တူပွားစေသော။ tags များလေအဓိပ္ပာယ်ပိုမိုဆင်တူသည် - "fur coats", "X fur coats", "fur fur coat" X တွင် "- site စာမျက်နှာများသည်သူတို့၏ထူးခြားမှုကိုဆုံးရှုံးလေလေဖြစ်သည်။
ထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေဖြင့် robots.txt ရှိ indexing မှ tag စာမျက်နှာများကိုပိတ်နိူင်သည်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး tags များ (tags) ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဘလော့ဂ်မှဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုလူမှုကွန်ယက်များပေါ်တွင်ဝေမျှ။ မရပါ (သို့) ဆောင်းပါး၏အဆုံးသို့မဟုတ်အစတွင်ရှိသင့်လျော်သောခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ခြင်းဖြင့်မက်ဆေ့ခ်ျပို့ခြင်းမပြုပါကသင့်ဆောင်းပါးကိုပိတ်ဆို့နေသည်ဟုစဉ်းစားပါ။ လူမှုကွန်ယက်များပေါ်တွင်ဗိုင်းရပ်စ်သွားနိုင်စွမ်း။
၁၉ သော့ချက်စာလုံးကိုညွှန်ပြပေးသော attribute ကို
ရုပ်ပုံ၏အမည်တွင်သော့ချက်စာလုံးလည်းပါရှိပြီး IMAGE_325 ဟုမခေါ်ပါ။
အကယ်၍ ဆိုက်သည် HTML ၌ရှိလျှင်ရုပ်ပုံကိုအောက်ပါအတိုင်းရေးသည် - <imgsrc="image address" alt="keyword">
Joomla, WordPress နှင့်အခြားထင်ရှားသော CMS များတွင်ပုံတစ်ပုံထည့်သောအခါပျင်းရိလွန်းခြင်းမရှိဘဲဖြည့်ရန်လိုအပ်သည့် ALT attribute အတွက်နေရာတစ်ခုရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဘလော့ဂ်တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ၀ င်းဒိုးတောင်းဆိုခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားပါကသို့မဟုတ်လက်တော့ပ်တစ်လုံးဝယ်သည်ဆိုပါက၊ ဥပမာအားဖြင့်“ X ရှိအကောင်းဆုံး ၀ င်းဒိုး” ခေါင်းစဉ်ပေါ်ရှိဆောင်းပါးများကိုသုံးခြင်းသို့မဟုတ်“ Y တွင်လက်ပ်တော့တစ်ခုမည်သို့မှာယူရမည်နည်း” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆောင်းပါးများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဒီဟာကဖြုန်းတီးနေသောအချိန်နှင့်မပြည့်စုံသေးသောမျှော်လင့်ချက်များ မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမျှ ဦး တည်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤအရာကိုနားလည်ရန်ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုကြည့်ရှုရန်လုံလောက်သည်။ HF မေးမြန်းချက်အရအဓိကအားဖြင့်ဆိုက်များ၏အဓိကစာမျက်နှာများနှင့်စီးပွားဖြစ် - ကုန်ပစ္စည်းများပါသောကတ်တလောက်အပိုင်းများဖြစ်သည်။
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းတောင်းဆိုမှုများကိုပင်မစာမျက်နှာသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှု/ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားစာမျက်နှာသို့တိုးမြှင့်သင့်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှု/ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားစာမျက်နှာသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ကဒ်အတွက်စီးပွားဖြစ်တောင်းဆိုမှုများသည် အကယ်၍ ၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအတွက်သီးခြားတောင်းဆိုမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
နိဂုံး။ SEO အမှားအယွင်းမလုပ်မိအောင်ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ။
စတင်ရန်ဤဆောင်းပါးပါအကြောင်းအရာများကိုစစ်ဆေးရန်စာရင်းတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြု၍ သင်၏ဘလော့ဂ်ရှိ SEO အမှားများအတွက်အချက်နှစ်ဆယ်ကိုသင့်ဘလော့ဂ်ကိုစစ်ဆေးပါ။
အကယ်၍ သင်သည်အချက် ၂၀ တွင်အားလုံးအမှာစာအပြည့်အစုံရှိပါကဘလော့ဂ်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၌ကောင်းမွန်သောရာထူးကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် visitors ည့်သည်များနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိသောဖောက်သည်များ (သို့မဟုတ်ပရိသတ်များ) ကိုကျေနပ်သည်။
သို့သော်၊ ဤအချက်များအနက်မှတစ်ခုသည်ပျောက်ဆုံးပြီးသင်မလုပ်နိုင်လျှင်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ Semalt သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုသင်၏ဒိုမိန်းရှိအကောင်းဆုံးဘလော့ဂ်များသို့အချည်းနှီးဖြစ်စေရန်ဂရုစိုက်လိမ့်မည်။ တကယ်တော့ဒီမှာ Semalt မှာဘလော့ဂ်တွေကိုထိပ်တန်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ SEO ကျွမ်းကျင်သူတွေဖြစ်ပြီးသင့်အတွက်လည်း caliber SEO ဝန်ဆောင်မှုများရှိသည် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tools တွေကို သင်မျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ပါ။ အတူတကွဤကိရိယာများ၏အကျဉ်းချုပ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကြပါစို့။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင့်အတွက်မည်မျှအသုံးဝင်မည်ကိုအသေးစိတ်သိနိုင်ရန်ဤလင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ။ SEO ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားမေးခွန်းများရှိပါက၊ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ပြီးပြည့်စုံသောကျေနပ်မှုအတွက်။